Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary 12,991,485,142 visitors served
(Placename) See Zimbabwe2
a complex of stone ruins discovered c1870 in Rhodesia, probably built by a Bantu people, and dating between the 9th and 15th centuries a.d.
He taught English at secondary school up to 'A' Level and has been a lecturer in Communication Studies at the Great Zimbabwe University since 2009.
The silence of Great Zimbabwe; contested landscapes and the power of heritage
This book is partly a travelogue and partly an investigation into ancient myths and legends centred on the 'lost civilisation' behind 'Great Zimbabwe' in Mashonaland (now in Zimbabwe).
Among the urban middle-classes 'the sense of la bella figura is quite Italian, and so is the philandering'; a general belief in witchcraft generates feelings of self-pity that are almost Irish'; 'as at Great Zimbabwe, the belief that the ruler ought to be hidden from view has led to the surrounding of former colonial residences with walls that are useful for defence' and 'as at Great Zimbabwe, the upper classes have followed suit with walls of their own'.
It was only in 2009 when Great Zimbabwe University in partnership with University of Venda introduced Venda and Shangaan at undergraduate level a positive step in realizing the importance of these languages.
Munyaradzi Mawere is a faculty member of Great Zimbabwe University.
Mr Sambulo Ndlovu is a lecturer in orature and language in the Department of African Languages and Literature at Great Zimbabwe University, in Zimbabwe.
The following day, at sunrise, it is our equally bright and shiny, and aptly named, guide Mangwanani (meaning "morning" in Shona) who welcomes us at the foot of the ruined city of Great Zimbabwe that was once the capital of the Kingdom of Zimbabwe, which existed from 1100 to 1450 AD during the country's Late Iron Age.
Occasionally they also include discussion of some unique feature of the country in question--for instance, the entry on Argentina includes coverage of the gaucho way of life and the entry on Zimbabwe discusses the archaeology of the city of Great Zimbabwe, built by the Shona people circa AD 1000--but these additional materials are by no means typical.